Budata Nemezis: Mysterious Journey III maka Windows
Budata Nemezis: Mysterious Journey III
Budata Nemezis: Mysterious Journey III,
Nemezis: Mysterious Journey III bụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya ebe ndị njem abụọ, Bogard na Amia, hụrụ onwe ha nọtụtụ ihe omimi. Gbanwee ihe mgbagwoju anya ma kpughee akụkọ na ịgaghị enwe ike iguzo ruo ọgwụgwụ.
Download Nemesis: Ozoemena Nsugbe
Njem ma chọpụta: ihe okike mara mma nke ukwuu, nke nwere oke osisi, nke nwere ọtụtụ akụkụ na nke dị omimi; Ilwa Regilus. Ọ bụghị nefu na ndị agha colonial na ndị nyocha onwe ha lụrụ ọgụ maka ụwa a. Nikpeazụ, mmiri nke akụ na akụ ndị dị na Regilus dị obere ka e kwesịrị ịlụ ọgụ maka ya, na enweghị mgbagha ọzọ ụlọ ọrụ njem njem teleportation mere ka ọ bụrụ ebe njem nleta pụrụ iche.
Gafee na oghere: Nemesis: Mysterious Journey III bụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya nke nwere ọtụtụ ụbụrụ ụbụrụ dịka ndị njem abụọ Bogard na Amia hụrụ onwe ha nọtụtụ ihe omimi. Ndị protagonists na-agbasa ma dabere na onye ndu nke omume ya na-adịwanye njọ ịchọta ibe ha.
Chọta enyi gị: Noge njem gị na Regilus, ndị dike ahụ ga-aga ebe asaa dị iche iche, nke ọ bụla bụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ. Bogard na Amia ga-edozi ọtụtụ mgbagwoju anya nke mgbagwoju anya dị iche iche iji chọta ibe ha. Nemesis: Mysterious Journey III bụ egwuregwu egwuregwu ọtụtụ egwuregwu. Họrọ ihe mgbagwoju anya nke dabara na ahụmịhe gị na ụdị egwuregwu ndị a. Nọtụtụ ọnọdụ, onye na-eduzi dijitalụ na-echere gị, onye ndụmọdụ ya dị ezigbo mkpa. Ma ì ji naka na ị nwere ike ịtụkwasị obi?
Onye mepụtara egwuregwu ahụ na onye na-ese ihe mgbagwoju anya bụ akụkọ akụkọ Roland Pantola, onye okike nke egwuregwu egwuregwu a ma ama dịka AD 2044, ReAH na usoro Schizm.
Itinye aka na njiko mgbagwoju anya nke ga-anwale ikike ị nwere ịkọ akụkọ ọsọ ọsọ ma chee echiche
Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ma dịkwa mma nanya na Planet Regilus
Edere ederede zuru oke, ihe omimi
Akụkọ na-akpali akpali ma na-akpali akpali nke njedebe ya ga-eju ọbụna ndị na-agba ume noge a.
Ntuziaka dijitalụ iji nyere gị aka nọnọdụ ndị siri ike na nsogbu dị iche iche dị iche iche dịka ahụmịhe gị
Nemezis: Mysterious Journey III Ụdịdị
Mmepụta: Detalion Games S.A.